Freddy Krueger wuxuu noqon doonaa "Qarowga" ee Dead by Daylight | Androidsis
Mid ka mid ah astaamaha ugu cabsida badan ee ka soo jeeda Qarowga Elm StreetFilimadaas 80s ilaa 90skii ayaa dhawaan u imanaya Dead by Daylight, ciyaar badan oo khadka tooska ah lagu ciyaaro oo mid ka mid ah ciyaartoydu qaato doorka ninka xun.
Noocan oo kale ah Dabeecad lab ah oo noqon karta cudurdaarka ugu fiican ee aad ku baran karto naftaada kulankaan khadka tooska ah ee ciyaartoy badan oo aan horey u qiimeynay sanadkii hore sida ciyaarta bisha Androidsis.
Dhintay by Daylight waa a ciyaarta ciyaartoy badan oo internetka ah oo afar ciyaartoy ay tahay inay ka baxsadaan si kasta oo ay u qabsadaan qaar ka mid ah ragga xun taariikhda naxdinta leh ee taariikhda shineemooyinka. Ciyaar jawi weyn iyo qabow leh oo qaadata kuwa ugu fiican filimadaas oo mar uun awooday inay naga dhigaan inaan ku dheganaano fadhiga.
Kuwa aan waligood arag mid ka mid riyooyinka habeenkii ee filimka Elm Street, Freddy Krueger Wuxuu ahaa gacan ku dhiigle xun oo ka soo muuqday riyooyinka koox dhalinyaro ah. Xaqiiqada ah inay seexan kari waayeen, maxaa yeelay Freddy wuxuu sugayay inuu laayo, wuxuu awooday inuu noo horseedo riyooyin badan oo qarow iyo daqiiqado xiisad weyn.
Sidoo kale galoofiskiisa mindi iyo dhogortaas oo uu ku silcayo dabka taasna waxay umuuqatay inay dhalaashay, iyo sidoo kale koofiyaddiisa gaarka ah iyo funaanadda casaanka iyo madow ee xariijimaha leh, waxay siisay taabashadii ugu dambaysay si uu u noqdo mid ka mid ah xumaan-wadeyaasha ugu caansan ee filimmada cabsida leh.
Freddy Krueger waxaa loo yaqaan 'The Nightmare in Dead by Daylight on mobile', iyo jilaaga ka dambeeya wuxuu noqon doonaa Quentin Smith, oo isagu ku ciyaaray 2010 reboot ee Riyo Riyood Riyood 'El Nightmare on Elm Street.
Xitaa waxaa jiri doona dhacdo loogu magac daray "Dabaaldaga Dhiiga" kaas oo Muuqaalka Freddy Krueger ee Dead by Daylight. Hadda in la sugo maalintaas.
Dhintay by Mobile Daylight
Developer: Isdhaafsiga Dhaqanka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Freddy Krueger oo ka socda 'A Nightmare on Elm Street' ayaa imanaya goor dhow Deadlight
Boostada rasmiga ah ee 'Redmi K40' waxay muujineysaa kamaradeeda seddexleyda ah: waxaa la sii deyn doonaa Febraayo 25